Kusolwa uphuzo ngengozi eBulwer | Isolezwe
Kusolwa uphuzo ngengozi eBulwer
Isolezwe / 23 August 2012, 12:33pm /
INGXENYE yabazali abebezimazise inkonzo yokukhumbula abafundi abashone engozini yemoto ebingoLwesibili. Le nkonzo ibiyizolo ihanjelwe ngabantu abehlukene
UTHISHANHLOKO waseDonnybrook Primary, uNkk Angela Gangiah, obechaza ngesimo abakuso esikoleni ngemuva kwale ngozi yangoLwesibili ebulale abafundi abangu-10. Izithombe: PATRICK MTOLO
SEKUVELE izinsolo zokuthi ubephuzile umshayeli weveni egingqike kwashona abafundi abangu-10 emgwaqweni u-R117 phakathi kwaseBulwer nase-Underberg ngoLwesibili. Othisha bathi umshayeli uSifiso Ngubo (26), naye oshonile kule ngozi ufike washaya isidudla esikoleni ngesikhathi ezolanda izingane bamkhuza ukuthi angayenzi le nto ayenzayo kanti uzogcina enze ingozi.
Umphathisiteshi waseBulwer, uColonel Vincent Kheswa, uthe ufike endaweni yesehlakalo abantu abazibonele ingozi yenzeka bamtshela ukuthi umshayeli ubehamba ngesivinini esiphezulu.
Uthe kuthiwa umshayeli udlule enye imoto wathi esebuyela emgwaqweni imoto yaphaphalaza yagcina isihamba ngamasondo amabili.
UKheswa uphinde waveza ukuthi le moto ibilayishe ngokweqile njengoba bebengu-25 abafundi kuyona engabaliwe umshayeli.
Bayisikhombisa abafundi abashonele endaweni yesehlakalo. Abathathu bashone izolo.
Bangu-18 abafundi abangeniswe ezibhedlela ezahlukene. Iningi lalaba abasesibhedlela kubikwa ukuthi isimo sabo sibucayi.
Kube nomunyu ehholo lomphakathi eBulwer lapho bekuhlangene khona imindeni, othisha nezikhulu zikahulumeni ngesikhathi kufika abafundi ababili baseBlessed Luanda Primary abebekhoba evenini kodwa basinda engozini.
Izolo ukufunda kuphazamisekile eDonnybrook Primary lapho kushone khona abafundi abayisishiyagalombili njengoba abantu bebephuma bengena bezobhonga emswanini. Bekukhona nosonhlalakahle bezoluleka abafundi.
Ngesikhathi Isolezwe lifika kulesi sikole izolo lifice othisha behlanganise amakhanda ehhovisi labo abanye bekhala.
Uthishanhloko, uNkk Angelay Gangiah, oyile endaweni yesigameko uthe ufice izidumbu eziyisikhombisa.
“Izingane bezisaphazeke emgwaqweni nomshayeli naye obeseshonile,” usho kanje.
UNkk Gangiah uthe asisoze sasuka emqondweni wakhe isithombe asibonile endaweni yesehlakalo.
IMeya kuMasipala Ingwe, uNkk Nomagugu Luzulane, ithe bazohlela umkhuleko ngenhloso yokulwa nezingozi zomgwaqo.
Ithe le ngozi icishe ifane neyenzeka ngo-2005 lapho imoto yaphuma emgwaqweni yashayisa abafundi behamba eceleni komgwaqo.
“Sibuhlungu lesi sehlakalo ngoba kunomndeni owodwa olahlekelwe yizingane ezintathu,” usho kanje.
Omunye umzali oshonelwe yingane yakhe, uNkk Irene Chagwe, uthe bakhungathekile yilesi sehlakalo.
UNgqongqoshe wezokuThutha KwaZulu-Natal, uMnuz Willies Mchunu, uthe bazoyifakela izibuko indaba yo”malume” abathutha abafundi ngamaveni.
“Akekho umuntu onelungelo lokuthutha abafundi ngeveni aphinde abakhokhise imali, bonke labo abakwenzayo lokho bayazi ukuthi baphula umthetho,” usho kanje.
UMchunu uthe bangu-22 abantu asebeshone ezingozini zomgwaqo kulesi sifundazwe phakathi kuka-Agasti 17 no-Agasti 21, wengeza ngokuthi akazi ukuthi kuyothi kuphela inyanga sebebangaki.
Uthe kuzo zonke lezi zigameko zidalwe iphutha lomuntu.
“Sihlale sixwayisa abantu ngezingozi zomgwaqo kodwa abafuni ukulalela,” usho kanje.